Jananinepal.comकोरोनाको उपचार सम्भब छ यसको लागि विज्ञानले आध्यात्मको साथ लिन जरुरी छ-परम गुरु श्री त्रिकुटानन्द - Jananinepal.com
कोरोनाको उपचार सम्भब छ यसको लागि विज्ञानले आध्यात्मको साथ लिन जरुरी छ-परम गुरु श्री त्रिकुटानन्द
प्रकाशित मिति: १८ चैत्र २०७६, मंगलवार
कोरोनाको उपचार सम्भब छ यसको लागि बिज्ञानले आध्यात्मको साथ लिन जरुरी छ- परम गुरुदेव श्री त्रिकुटानन्द
परम गुरुदेव श्री त्रिकुटानन्द ज्यु उहाँको लागि लोक परलोकको रहस्य पनि एकदम सामान्य छ्न भनिन्छ । जानकारी अनुसार उहाँको लागि भौतिक सूक्ष्म संसारनै एकदम सामान्य छ र जसमा भुत भविष्य वर्तमानको हरेक ज्ञान प्रत्यक्ष छ । वर्तमान अबस्थामा संसारभरी फैलिएको कोरोनाको महामारीको सामाधान कसरी हुन्छ र अवस्थाको बारेमा उहाँ संग लिएको अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गरेका छौँ ।
१) नमस्कार गुरुदेव जननी नेपालमा हजुरलाई स्वागत छ ।
– धन्यवाद, जननी नेपाललाई
२) अहिले विश्वव्यापी माहामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको उपचार सम्भव छ भन्नू भएको रहेछ के यो सत्य हो?
– अवश्य पनि सम्भव छ । यसको परिमाण जसरी मैले भित्री रूपमा हेरेको छु । त्यो अनुसार बाहिरी रुपमा हेर्नुछ । परिणाम भित्र रूपमा सत प्रतिसत छ तर प्राटिकली रूपमा प्रयोग नगरीकन भन्न मिल्दैन । त्यसैले यसको परिक्षण गर्नुपर्दछ ।
३) हजुरले कस्तो कस्तो विमारीलाई ठिक पार्नु भएको छ त? के उहाँहरु पुर्ण रूपमा स्वास्थ हुनु भएको छ?
– कस्ता कस्ता रोगको उपचार भन्दा पनि उपचारको नेचर एउटै हुन्छ मान्छेले नाम मात्र फरक दिएको हो। ती उपचारहरु फिजिकल,मेटाफिजिकल , साइकोलोजिकल ,पारासाईकोलोजिकल कुन अवस्थामा छ ,त्यसको अवस्था हेरेर अनेक प्रकारका विरामीको उपचार हुन्छ । त्यसको लागि फिजिकल ,मेटाफिजिकल रिएलिटी छ। त्यसलाई जस्ताको तस्तै बुझ्न् र जान्न सक्नुपर्छ तर बिज्ञानले आफूले गरेको बाहिरी अध्ययन र उसले बनाएको साधनको माध्यमबाट अनुसन्धान गर्ने हो। जबकि हाम्रो विधि भनेको दिव्य दृष्टिको माध्यमबाट समस्याको सबै कारण सहित निबारण गर्ने कोशीस गरिन्छ । हामीले दिने बिधिहरुमा प्राय नाङ्गो आँखाले देख्न सक्दैनौं नत कुनै प्रविधिबाट देख्न सक्छौ । त्यो भन्दा पर हुनाले गर्दा विज्ञानले नसकेका कुराहरु आध्यात्मिक बिधीहरुबाट संम्भव हुन सक्छ । तर त्यो विमारिको अवस्थालाई पनि हेर्नुपर्छ । यदी शरीर बिल्कुल काम नलाग्ने भैसकेको छ भने त कसैको पनि केही लाग्दैन । हरेक कुराको उचित समयलाई समाउन सक्नुपर्छ ।
४) यस कोरोनाको मेटाफिजिकल रिएलिटी कस्तो खालको रैछ गुरुदेव ? आध्यात्मिक दृष्टिकोण बाट यसलाई कसरी देख्न सकिन्छ ?
– यसलाई ठ्याक्कै भौतिक रूपमा बर्णन गर्न लामो क्लास नै चल्नुपर्छ । किनभने विज्ञानको भाषा त फेरी पनि मान्छेले सुनेकै हुन्छ तर शुक्ष्म शरीर या शुक्ष्म जगतको धेरै कुराहरु मान्छेले सुनेको पनि हुँदैन न त त्यसलाई अध्ययन गर्ने कुनै बिधी बिधानहरु नै बनाएका छन । बनाइ हाले पनि पढाउने कसले ? शुक्ष्म जगतमा प्रवेश गर्न या भौतिक संसार देखी पारीको रहस्यलाई जान्न यती सजिलो पनि छैन । यि सबैकुराहरुलाई अध्ययन गर्न नसक्नु, सही मार्गदर्शन दिनेवाला नहुनुको कारणले त आजका दिनहरुमा वेद उपनिषद जस्ता शास्त्रहरु पनि अधूरै बनेका छन । केवल बाहिरी अध्ययनले मात्रै शास्त्रले दिन खोजेको कुराहरु कहाँ पाईन्छ ? लंकामा सुन छ, कान रित्तै भने जस्तै हो । अर्को कुरा मेडिकल साइन्सको पढाई गर्नको लागि वर्षौं अध्ययन गर्नुपर्छ, त्यसैगरी नै मेटाफिजिकल रिएलिटीको बारेमा जान्नको लागि पनि वर्षौंको अध्ययन र अनुसंधान चाहिन्छ । फेरी पनि छोटकरिमा भन्नुपर्दा कोरोनाको आफ्नै समूह र संसार छ जसरी मौरिको बारूलाको अरिंगालको हुन्छ । जसलाई मैले पुस्तकमा पनि उतारी सकेको छु । बाहिरी जगतमा रहदासम्म थुप्रै झुण्डहरु बनाएर लाईहरु टासिएर झारपातमा टासिए जस्तैगरी टासिएको हुन्छ । अती शुक्ष्म भए पनि त्यतिखेर एकदम लामो पुच्छर भएको, पेटको भाग एकदम ठुलो माकूराको जस्तो, खुट्टाहरु पनि माकूराको जस्तै, शरीरको हरेक भाग विशेष गरी पुच्छरबाट एकदम लामा लामा कपालका रौं जस्ता झुसहरु फैलिरहेको, टाउको र मुख कमिला या मौरी जस्तो देखिन्छ । मलाई पनि हेर्न अत्यन्तै मुश्किल परेको थियो । शरीर भित्र पसेपछी लामा लामा झुसहरु सहितको सि उर्चिन (एक खालको समुद्री किरा जस्तो) जस्तो डल्लो बनेर फैलिन शुरु गर्छ ।
५) हजुरको आध्यात्मिक रहस्यको बारेमा बनाई दिनुस न ?
-मैले आफ्नो आध्यात्मिक रहस्यको बारेमा बताउनु भन्दा पनि पहिले हरेकले आध्यात्मिक सत्यलाई जान्न बुझ्न आवश्यक पर्छ । किनकि आध्यात्मिक रहस्यलाई मैले बताएर मात्रै मान्छेले त्यसलाई बुझ्न सक्दैनन । बताएपछिको जो एक्स्पेरिमेन्टल रिएलिटि छ, त्यसलाई वोध गर्नु नै ठुलो कुरा हो । यसकारण मान्छेले मलाई जुन स्तरबाट हेर्छन्, जुन स्तरमा पुग्न सक्छन् त्यही स्तरबाट बुझ्न् सक्छन र त्यही स्तरमा पुग्न सक्छन् । चेतनाको स्तर जती छ, त्यती नै देख्ने या बुझ्ने हो । त्यसकारण ठ्याक्कै म यस्तो उस्तो भन्न सक्दिन म भौतिक शरीरमा छु एउटा रिएलिटी छ, त्यो भन्दा पर छु अर्को रिएलिटी छ। जसले जस्तो प्रकारको चेतनाबाट जस्तो प्रकारको दृष्टिबाट जस्तो प्रकारको भावबाट जस्तो प्रकारको व्यक्तिगत क्षमता छ त्यो आधारले देख्ने बुझ्ने जान्ने कुरा हो । तथापि मेरो आध्यात्मिक रिएलिटी मैले जुन पनि मान्छेको आफ्नो चेतनाको स्तर अनुसारको बुझाई हुन्छ, त्यो बुझाई, हेराई, भावकै स्तरबाट मैले आफ्नो सत्यतालाई बताउन बुझाउन सक्छु । त्यो भन्दा परको कुरा त कसरी बताउ जसले जस्तो लेबल बाट हेर्छ त्यही लेबलबाट उसले बुझ्न् जान्न सक्छ ।
६) अहिलेको समयमा यस्तो कुरामा कसैले सजिलै विश्वास गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ। त्यसैले विश्वास गर्ने आधारहरू के के छन बताई दिनुहोस न ?
– किन नहुने जस्तो हरेक मान्छेले कुनै पनि कुरा गर्छ यदि आत्मा परमात्माको कुरा गर्छ भने त्यो पनि त भएरै गरेको हो । यदि कसैले जन्म मृत्युको कुरा गर्छन् या अहिलेको कोरोनाको बारेमा नै कुरा गर्छौ भने त्यो पनि भएरै गरेको त हो । सबैले कोरोना देखेको छैन तर कोरोनाको परिणाम देखेका छन । कोरोनाको विषयमा पनि मान्छेले जति जान्न बुझ्न पर्ने हो , त्यती जान्न बुझ्न सकेका छैनन । त्यही भएर त समस्या झन झन बिकराल बनेको हो । त्यही कुरा मैले कोरोनाको गहिराइमा गएर यस्को विश्लेषण गरेको छु । अब यसलाई पत्याउन सक्नु नसक्नु आफ्नै एउटा बन्द बुद्धि, बन्द चेतनाको कारण हो । त्यस कारणले गर्दा पत्याउनु-नपत्याउनु या विश्वास गर्नु-नगर्नु भनेको मान्छेको आफ्नै लेवल हो । विश्वाश या अविश्वास पनि त्यस प्रतिको ज्ञान या अज्ञान हो । यदि अज्ञान छ विश्वास छैन भने या ज्ञान छ भने विश्वास हुन्छ । यदी नजानी विश्वास गरेको छ भने अन्धविश्वास, यदी जानेर बुझेर, अध्ययन गरेर गरेको छ भने विश्वास । त्यसकारणले गर्दा हामीले पत्याउनु-नपत्याउनु या ब्लाइन्डली कसैलाई या केही कुरा प्रती बिश्वास गर्नु भन्दा पनि त्यसको हामीले गहिरो अनुसन्धान गरेर त्यसलाई विश्लेषण गर्नसक्नु ठुलो कुरा हो । अर्को कुरा कुनैपनी कुरालाई सिधै अस्वीकार गर्नुभन्दा पहिला पारीणामको लागि परिक्षणको मौका पनि दिनुपर्छ । कुनैपनी कुरा विज्ञानले के एकै पटकमा सफलता पाउन सक्छ र ? कती अरवौं पैसा खर्च गरेर केही अंश मात्रै पारीणाम पाउछ । फेरी यि आध्यात्मिक रिसर्चहरुलाई किन एक पटक पनि परिक्षण नगरि या गर्ने मौका नदिकन सिधै अस्वीकार अविश्वास गर्ने ? यसो गर्नु भनेको सत्य प्रतिको अपमान पनि हो, घोर अज्ञानता पनि हो ।
7)गुरु जी अहिले यो महामारीको रुपमा रहेको कोरोनाबाट पीडित बिरामीहरुलाई कसरी उपचार गर्नु हुन्छ र पद्धति के छ?
– यसमा धेरै कुराहरु पर्छन । अनी सबैकुराहरु भन्न पनि हुँदैन, भनेर साध्य पनि छैन । फेरी पनि हजुरले सोधी हाल्नु भयो । पहिला हामीले कोरोनाले कहाँ सम्म असर पारेको छ भनेर बिमारिको अवस्था हेर्छौं । अनि सवैभन्दा पहिला व्यक्तिको शरीरबाट कोरोनालाई नष्ट गरिदिन्छौं । अनि रोगिको भौतिक शरीर र शुक्ष्म शरीरमा कोरोनाको कारणले गर्दा भएको क्षत-विक्षत प्रणालिहरु, चक्र नाडिहरु, अङ्ग प्रत्यङ्गहरु र कोशीकाहरुलाई पुनर्जिवित र पुनर्संन्चालन गर्न शुरु गर्छौं । यसको लागि व्यक्तिले पनि हामीले सल्लाह दिए बमोजिम गर्नुपर्छ । खाने औषधी पनि बनिसकेको छ ।
अर्को फेरी यसैको लागि मैले विशेष रुपमा उपचार बिधीको आविष्कार गरेको छु । जसको नाम ‘अल्टिमेट डिवाइन हिलिङ्ग’ भनेर राखिदिएको छु । जसमा थुप्रै शक्ती र सत्यका रहस्यहरु भरी भराउ छन । अर्को कुरा कोरोना भनेको त अत्यन्तै सानो नेगेटिव एनर्जीको कणमात्र हो मैले शक्तिपात गर्ने क्रममा ठूला ठूला नेगेटिव एनर्जीहरु यत्तिकै पनि जलेर नष्ट हुन्छ भने कोरोना त केही पनि होइन ।
८) अन्तमा हाम्रा पाठकहरुलाई के सन्देश दिन चाहनु हुन्छ ?
– सबैभन्दा पहिला सरकारले दिएको आदेश र स्वास्थ्य विभागले दिएको कुनैपनी सुचनाहरुलाई इमान्दारी पूर्वक पालना गरौं । यसमा आफूलाई मात्रै होइन, सम्पूर्ण देशवाशीको सुरक्षाको बिषय हो । अरुले भनेर मात्रै होइन, आँफै पनि सचेत हुनु अत्यन्तै आवश्यक पर्छ । कोरोना वास्तवमा नै डरलाग्दो छ, हामीले बिभिन्न संचारहरुको माध्यमबाट बिभिन्न देशहरुको अवस्था देखेकै छौं । यस्तो आपतकालिन परिस्थितीमा हामी सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्छ । विज्ञानले मात्रै यसको पूर्ण समाधान पाउन मुश्किल पर्छ या धेरै ढिला भैसकेको हुन्छ । यदी सरकारले चाहेमा हामीले विश्वलाई नै कोरोनाको चपेटाबाट मुक्त गराउन सक्छौं । विश्वास नगरे पनि पारीणामको लागि परिक्षण गर्न दिनुपर्छ । विश्वको कल्याणको लागि मेरो पूरै परिवार लागिपरेका छौं । लामो र गहिरो खोज अनुसन्धान पश्चात हामीले अन्तिम उपाय निकाल्न सफल भएका छौं । सबै श्वस्थ, दिर्घायु, खुशी र शुरक्षित हुनुहोस । केही कुराहरु राख्ने मौका दिएकोमा हजुरलाई पनि धन्यवाद – श्री ॐ प्रभु ।
गल्कोटका एक व्यक्तिले गरे आत्महत्या
शशि कार्की द्वार सिन्धुली जिल्ला मरिण गाउँपालिकालाई स्वास्थ सामग्रीको सहयोग।
भट्टराईले केपी शर्मा ओलीको हर्कतबाट देश र जनतालाई मुक्ति
शेरधन राई खुवलुङ क्षेत्रको भ्रमण
घाँस काट्न जाँदा बेपत्ता भएका सातै जना भारतमा
नेपालकै ठूलो दाबी गरिएको पानीजहाज एक महिनादेखि बन्द
6 महिनाका लागि पार्टी सदस्यबाट निलम्वन
अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य अवार्ड भारत बाट समाजसेवि लक्ष्मण श्री दोहोरी गायक राजु परियार लगायत भारत र नेपाल विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तितहरु सम्मानित
खेम सेन्चुरी र सुनिता बुढाको “माईली” बन्यो लोक प्रिय , युटुवको ट्रेडिङमा 07…